नुहाएपछि छाला फुस्रो हुने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
छाला फुट्ने र डण्डिफोरको समस्या समाधान कसरी गर्ने
छाला सुन्दर र आकर्षक बनाउने खानेकुरा
दिनको ६-७ ग्लास पानी पिउनुहोस ।
प्रशस्त पानी पिउनाले तपाईको छाला सुख्खा हुनबाट बचाउछ। साथ साथ पेट पनि सफा राख्न मद्धत गर्छ । याद गर्नुहोस्, तपाईको पेटको अवस्था ठिक छैन भने अनुहारको छालाको चमकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।
कागती छालामा लगाउने गर्नुहोस, यसले छालाको रंग हल्का बनाउने गर्छ
छालाको पिगमेन्टसहरुमा बिस्तारै काम गर्छ र छालालाई हिलिङ गर्ने काम गर्छ कागतीले । बराबर मात्रामा पानी र कागतीको रस मिसाइ स्प्रे वा छालामा लगाउने गर्नुहोस, फरक तपाई आफैले थाहा पाउनुहुनेछ ।
छाला चाउरी पर्नबाट जोगाउने यी फलहरु
पवित्र फलको रुपमा चिनिने मेवामा प्राकृतिक रुपमा पोषणयुक्त तत्वहरु हुन्छन ै। मेवाले तौल घटाउन र मुटुको रक्षासमेत गर्छ । यसले तपाईको छालालाई ताजा र जवान देखाउँछ । मेवाको कालो बियाँ पनि स्वास्थ्यका लागि त्यत्तिकै लाभदायक हुन्छ । मेवाको बियाँले शरीरको उत्तेजनालाई फाल्नुका साथै कालो छालाका कोषलाई हटाइदिन्छ ।
अनारमा ठूलो मात्रामा प्युनिसिक एसिड, इलेजिक एसिड र एन्टिअक्सिडियन्टस हुन्छ । ओमेगा ३ फ्याटी एसिडयुक्त अनारले छालाको कोषलाई बृद्धि गर्छ । यसले रेड ब्लड कर्पुस्केल्स ९आरबीसी० हुने रक्त प्रबाहका लागि उपयोगी हुन्छ । यसमा भिटामिन ए, सी इ लगायत महत्वपूर्ण खनिज हुन्छन् । यो एउटा स्वभाविक मोश्चराइजर पनि हो जसले छालालाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ ।
छाला गोरो बनाउने घरेलु उपाय
गोरो बन्ने रहर धेरैलाई हुन्छ र यसैका लागि मानिसहरुले धेरै रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्छन् । अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ । अनेक किसिमका क्रिम, पाउडर मात्र नभएर प्रविधिह समेत गोरो बन्न प्रयोग गर्न थालिएको छ । कतिपय यस्ता चिजहले नकारात्मक असर पनि गरिरहेको छ ।
सबैको छालमा लागू नभए पनि गोरो बनाउन धेरै घरेलु कुराले पनि मद्द्त गर्छ । हामीले खानेकुराले पनि छालाको गोरोपनामा भूमिका खेल्छ । केही तरकारी तथा फलफूलमा भएका गुणहरुले हामीलाई प्राकृतिक रुपमै गोरो बनाउन मद्दत गर्छन् । तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छन
यस्ता फलफुल तथा तरकारी यस्ता छन्
क्याप्सिकम (भेडे खुर्सानी)
पालुंगो तथा अन्य हरियो पात हुने तरकारी ।
यसबाहेक अनुहारमा कागती, टमाटर, दही, दूधले मसाज गर्नाले पनि छाला गोरो हुन्छ ।
Topics #छाला फुस्रो हुने समस्या #छालालाई कसरी बचाउने #छालालाई स्वस्थ कसरी राख्ने
Don't Miss it फुड पाेइजन के हाे ? कसरी हुन्छ र यसकाे समाधान के हाे ? जान्नुहाेस्
Up Next आँखामुनि कालो घेरा किन बस्छ ? थाहा पाउनुहाेस्